News | Page6| Myanmar Industry Portal
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချို UNIDO Myanmar Regional Office ၏ Director and Representative ဖြစ်သူ Mr. Stein R. Hansen ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် UNIDO Myanmar Regional Office ၏ Director and Representative ဖြစ်သူ Mr. Stein R. Hansen ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ (၁၄:ဝ၀) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုအား CNH Industrial Services Ltd. နှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၊ Csepel Holdings Plc. တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် CNH Industrial Services Ltd. ၏ Business Director (Agriculture) ဖြစ်သူ Mr. Mustak Emre Karazli ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၊ Csepel Holdings Plc. ၏ Board of Director တစ်ဦးဖြစ်သူ Mr. R. Kalaichelvan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အား ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့ (ဝ၉:ဝ၀) နာရီနှင့် (၁၃:ဝ၀) နာရီတို့တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် Great Myanmar Co., Ltd. မှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောဒေသတွင် တည်ဆောက် တပ်ဆင်မည့် သီးနှံ (စပါး) သိုလှောင် Silo ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၈)
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် (၈.၂.၂၀၁၈) ရက် နေ့တွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၀)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Great Myanmar Co., Ltd. မှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောဒေသတွင် တည်ဆောက်တပ်ဆင်ရန်အတွက် သီးနှံ (စပါး) သိုလှောင် Silo ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ချိုသာဂရစက်မှုနယ်မြေရှိစက်ရုံများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ (၃)
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်္ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H. E. Ms. Vanessa Chan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ‌၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁ )
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်္ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H. E. Ms. Vanessa Chan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် (ဝ၉: ၃၀) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်) ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ရန်ကုန် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်
POSCO Daewoo Myanmar Corporation Ltd.၏ Managing Director ဖြစ်သူ Mr. Won Yoo-Joon ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် TTCL Public Co., Ltd. ၏ President ဖြစ်သူ Mr. Hironobu Iriya ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် POSCO Daewoo Myanmar Corporation Ltd. ၏ Managing Director ဖြစ်သူ Mr. Won Yoo-Joon ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲနှင့် TTCL Public Co., Ltd. ၏ President ဖြစ်သူ Mr. Hironobu Iriya ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၁)ရက်နေ့၊ (ဝ၉:ဝ၀)နာရီနှင့် (၁၁:ဝ၀)နာရီတို့တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုအား JICA Myanmar Office မှ Chief Representative ဖြစ်သူ Mr. Masayuki KARASAWA ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် JICA Myanmar Office မှ Chief Representative ဖြစ်သူ Mr. Masayuki KARASAWA ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား (ဝ၉:၃၀) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချို မကွေးတိုင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်း အတွင်းရှိ စက်ရုံများနှင့် စက်မှုသင်တန်းကျောင်း တို့အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချို သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၃)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မကွေးတိုင်း၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့ရှိ ဝါကြိတ်စက်ရုံ သို့ရောက်ရှိပြီး Ko Ko Myint International Trading Co., Ltd.
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချို ဒုတိယလေးလပတ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ (၂၈)
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့တွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စုပေါင်းအစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဒုတိယ လေးလပတ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သည်။